कृष्ण ओलीको हात जोडेपछि फर्कियो खुशी: रुपालाई गुलाबको फुल दिदै, मिठाई समेत खुवाए, माईक समातेर गित गाउन लगाउँदा यसरी रोइ न् रुपा (भिडियो हेर्नुस्) – Etajakhabar
कृष्ण ओलीको हात जोडेपछि फर्कियो खुशी: रुपालाई गुलाबको फुल दिदै, मिठाई समेत खुवाए, माईक समातेर गित गाउन लगाउँदा यसरी रोइ न् रुपा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, २६ भदौ । आफ्ना पतिलाई कृतिम हात खुट्टा लगाउन सहयोग गर्ने देश विदेशका सबै शुभचिन्तकलाई रुपाले धन्यवाद दिएकी छन् । अन्तरजातिय विवाह गरेका रुपा र कृष्णको खुसी विवाह गरेको केही महिनामै लु टिएको थियो । करेन्ट लागेका कारण कृष्णले हात र खुट्टा गुमा एका थिए । सो अवस्थाको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि देश र विदेशवाट उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नेको ओइरो नै लाग्यो । अहिले भारतवाट कृष्ण ओली कृतिम हात खुट्टा लगाएर नेपाल फर्किएका छन् । विहिवार नेपाल फर्केर घर पुगेका उनीहरुलाई भेट्न जानेको भिडनै लागेको छ ।
कृतिम हात लगाएर पहिलो पटक भेट्न आउनेहरुले दिएको मिठाई आफ्नो हातले रुपालाई खुवाउन पाउँदा कृष्ण दंग थिए । उनी अन्तराष्ट्रिय त्रिभुवन विमान स्थलमा आफै हिँडेर बाहिर निस्केका थिए । कृतिम हात लगाएपछि उनले हात चलाएर पनि देखाएका थिए । उनले रुपालाई मिठाई खुवाइदिए, गुलावको फूल समेत दिए । उनले युट्युव च्च्यानलवालाको माइक समातेर रुपालाई गित गाउन लगाए ।
रुपाले पनि निकै मिठो गीत गाइन् । गीत गाउँदा गाउँदै रुपाको आँखा रसाए । रुपाले आफुहरुलाई विपतको बेलामा सहयोग गर्ने देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई धन्यवाद दिएकी छन् । ५० दिन भारतमा बसेर कृतिम हात खुट्टा लगाएर आएका उनीहरुले कृतिम हातखुट्टा लगाउन निकै महँगो परेको पनि बताए । कृष्णले आफुमा आएको यस्तो परिवर्तनले पनि निकै खुसी जनाएका छन् ।
रुपा मगर र कृष्ण वली केही समयदेखि यूट्यूबमा ‘भाइरल’ छन् । विद्युत प्राविधिक कृष्ण र रुपा मगरबीच अन्तरजातीय विवाह भएको थियो । एक फिल्मको छायांकनका क्रममा देखभेट भइरहँदा कृष्ण र रुपाको मन साटियो । उनीहरुले बिहे गरे । तर, राम्ररी दाम्पत्य सुखभोग गर्न नपाउँदै कृष्ण वली जीवन–मर णको दोसाँधमा पुगे, विद्युतीय झट्का लागेर ।
अनेक उपचारपछि उनको प्राण जोगियो । तर, दुई हात र एउटा खुट्टा जोगिएन । उनी शारीरिक रुपले अशक्त भए । यहि मोडमा आइपुगेपछि हो, रुपा र कृष्णवीचको स्वच्छ माया–प्रेम दुनियासामू पुगेको । अशक्त श्रीमानप्रति रुपाको त्याग र समर्पण वास्तवमै अनुकरणीय थियो । उनीहरुको प्रेम–गाथा सर्वत्र फैलियो । अन्ततः देश–विदेशका मनकारी नेपालीले कृष्ण र रुपाको अनुहारमा खुसी देख्न चाहे । उनीहरुले स्वतस्फूर्त आर्थिक सहयोग जुटाइदिए । अहिले यो जोडीको अनुहारमा मुस्कान पmर्किएको छ । कृष्ण कृत्रिम हात खुट्टाको सहारामा जीवन बाँच्ने आशामा छन् । देश र विदेशवाट आएको आर्थिक सहयोगले अहिले कृष्णको कृतिम हात खुट्टा लागेको छ ।
Posted on: Thursday, September 12, 2019 Time: 14:12:31
तयार भयो लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा
चिनमा नेपालले उपहार दिएको ‘सोल्टी’ गैँडा पनि म’र्यो, ‘मितिनी’ एक्लिइन्
बानेश्वरको पाटी प्यालेसमा विवाहको भव्य तयारी, वेहुला नै नआएपछि बुझ्न जाँदा खुल्यो नसोचेको रहस्य
वामदेव ‘कार्ड’ले नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल, प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई फोनमा भने ‘कि वार कि पार’
पारस खड्काले चढ्न थाले ५१ लाखको गाडी
देश छोडेर बेलायत बस्न जान लागेको भन्ने आरोप लागेपछि सुजाता कोइरालाले भनिन्, ‘देश छाड्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ’
सदनको आवाजः ‘७० करोड कमिसन प्रकरणबारे जानकारी देउ, केक चार्टर गर्नुभन्दा औषधी चार्टर गरेर हेलिकप्टर हुम्ला पठाईदिउँ,
कञ्चनपुरको महोत्सवमा ज्योती मगर नाच्दा युवा उ’त्ते’जित, झ’ड’पको स्थिति आएपछि प्रहरीद्धारा ला’ठी’चा’र्ज
उदिपका साथमा खुलेकी आँचल, पलले दिए विवाहको शुभकामना (तस्बिर सहित)
घटना घटेको २४ घण्टा नहुँदै सानेपाको घट्नाको तथ्य बल्ल बाहिर आयो !
घट्ना घटेको ३ दिनपछि बल्ल खुल्यो विजय चौधरीको असली पोल, मुनाले अर्की कामदारसंग विजयको बारेमा यस्तो कुरा गर्थिन् !
सानेपा का’ण्डको नयाँ खुलासा, ह’त्याको कारण खुल्यो, छोरीहरु नेपाल आए
अब चन्द्रागिरी केवलकार चढ्न यो दिन पैसा नलाग्ने
‘अर्बौ पैसा कमाउन र चीनलाई कमजोर बनाउन यी दुई देशले रचेको ष’ड्यन्त्र हो कोरोना भा’इरस’
पूर्वसचिव कार्की पत्नीको ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’आयो, डाक्टरले दिएको रिपोर्टमा यस्तो छ रिपोर्ट !
काम सके त्यसपछि अजितालाई लगेर फा’ले !
मुना काण्डको नयाँ तथ्य खुल्दै : पूर्वसचिव कार्की पत्नीमाथि गर्थे यस्तो शंका
भारतले मिचेको लिपुलेक समेटेर सरकारले तयार गर्‍याे नेपालकाे नयाँ नक्सा
-18552 second ago
-16162 second ago
-15312 second ago
-14382 second ago
आज फागुन १५ गते विहिवार, पाथिभरा माताको दर्शनगरी जान्नुहोस राशिफल
-13417 second ago
अमृत सापकोटा र उनको श्रीमती पहिलोपटक टुडिखेलमा लाखौ दर्शकको बिचमा दोहोरी खेल्न आउदै,दर्शकलाइ हेर्न पैसा न लाग्ने
Chairman:- Rina shah
Editor:- Rupani GM
Address:- Alok Nagar - 31, Minbhawan , Kathmandu Nepal
Contact number:- 00977-9843142248
Administrative chief:- Ratan Bahadur Chand
Reporter:- Punam Hamal
Email:- [email protected],@etajakhabar.com